कुन उमेरमा हुने महिनावारी गडबडीलाई गम्भिर रुपमा लिने ? | सुदुरपश्चिम खबर
काठमाडौं- महिनावारी हरेक महिलाको जिवनमा किशोरावस्थामा शुरु भई महिनामा एकपटक योनीमार्गबाट रगत जाने प्राकृतिक प्रक्रिया हो । महिनावारी कुनै पनि महिला आमा बन्नका योग्य भएको प्रमाण हो । महिनावारी भएपछि एक किशोरीलाई परिपक्व मान्ने गरिन्छ । एक महिलाको जिवनमा महिनावारी कम्तिमा १० वर्षको उमेरबाट सुरु भई ५०–५५ बर्ष भित्रमा सुक्छ अर्थात बन्द हुन्छ । सामान्यतय महिनावारी २८ दिनको अन्तरालमा हुन्छ । हाल धेरै महिलाहरु महिनावारी गडबढि भयो, महिनावारीको समयमा अत्याधिक पिडा भयो जस्ता गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । यो समस्या हरेक घरमा छ भन्दा फरक नपर्ला । महिनावारी गडबडी किन हुन्छ ? भन्ने बिषयमा विराट अस्पतालमा कार्यरत बरिष्ठ स्त्रि रोग विशेषज्ञ डा.अमित देबसँग महिला स्वास्थ्यकर्मी समृद्धा के.सी. ले गरेको कुराकानीको केहि सम्पादित अंशः
१. महिनावारी गडबडी किन हुन्छ ?
सामान्यतय महिनावारी १० वर्ष देखि सुरु हुन्छ । महिनावारी गडबडी हुनुलाई तिन भागमा विभाजन गरिएको छ। विभिन्न समयमा महिनावारी गडबडी हुनुका छुट्टा छुट्टै कारणहरु हुन सक्छन् । सामान्यतय महिनावारी सुरु भएको अवस्थामा र सुक्ने अवस्थामा पनि महिनावारी गडबडी हुन्छ । यसलाई सामान्य रुपमा लिइन्छ । यो बिस्तारै आफै ठिक हुँदै जान्छ । अन्य समयमा महिनावारी गडबडी हुने विशेषत ३-४ वटा कारणहरु रहेका छन् । पाठेघरमा समस्या, थाइरोइडको समस्या, महिलाहरुमा भएको रसायनिक हार्मोनको तालमेल नमिलेमा पनि महिनावारी गडबडी हुन्छ । भने अर्को कारण पढ्ने विद्यार्थी जसले धेरै तनावहरु लिन्छन् त्यस्तो महिलाहरुमा पनि यो समस्या भएको पाइन्छ । पाठेघरमा एमिनो माइक्रो पलाएर पनि यो समस्या देखिन सक्छ ।
किशोरावस्थामा महिनावारी गडबडी हुन्छ भने त्यो हार्मोनल कारण हो भन्न सकिन्छ । यो उमेर समुहका महिलाहरुमा महिनावारी गडबडी हुनुलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । तर प्रजनन उमेर समुहका महिलाहरुमा महिनावारी अनियमितता भएमा चिकित्सकको परार्मश लिन आवश्यक हुन्छ ।
२. तनावले महिनावारी अनियमिततामा कस्तो भूमिका खेल्छ ?
हाम्रो सबै सम्बन्ध मस्तिष्कसँग सम्बन्धित हुन्छ । तनावले हार्मोनमा पनि घटबढ गराउन सक्छ जसले गर्दा २-३ पटक तनावका कारण महिनावारी गडबडी हुन सक्छ । तनावका विभिन्न कारणले हुनसक्छ । यसका किसिमहरु पनि धेरै छन् । तनाव बढि लिने व्यक्तिहरु डिप्रेसनको शिकार हुने गर्छन ।
महिनावारी गडबडी भएसँगै डिप्रेसन जस्ता तनावका कारण लाग्ने रोगहरको पहिचान भएमा सुरुमा डिप्रेसन वा तनावको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक हुन्छ । तनाव व्यवस्थापन भएपछि महिनावारी नियमित हुने सम्भाबना बढि हुन्छ ।
३.केहि महिलाहरुको महिनावारी समय पुग्नु भन्दा अघि हुने र केहि महिलाहरुको समय भन्दा ढिलो हुने गर्छ यस्तो समस्या के कारणले हुन सक्छ ?
सामान्यरुपमा महिनावारी चक्र अनुसार २८ दिन भित्रमा महिनावारी हुनु पर्छ । महिनावारी सात दिन अगाडी पछाडी हुनुलाई नियमित महिनावारी नै मान्नु पर्ने हुन्छ तर त्यो सात दिन कट्यो भने मात्र अनियमित महिनावारी भन्नु पर्छ । त्यस्तो अवस्थामा सतर्क हुनु पर्छ ।
सेतोपानी बढि बग्ने महिलाहरुमा पनि यो समस्या देखिन सक्छ । तर कसैको नियमित ४०-४० दिनमा नै महिनावारी हुन्छ भने पनि त्यसलाई नियमित महिनावारी भन्नु पर्छ ।
कुनै महिलामा महिनाको २ पटक महिनावारी हुने गर्छ वा १५-२० दिनमा महिनावरी भइहाल्छ तर थोरै रगत बग्छ भने त्यसलाई त्यति खतरापूर्ण मान्नु हुदैन तर त्यस्तो अवस्थामा रगत धेरै बग्छ भने चाहि सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन ।
कुनैपनि रोगको पहिचान समयमै गरियो भने उपचार गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यसरी छिटो नै महिनावारी हुनु भनेको बिशुद्ध हर्मोनको घट्नु वा बढ्नु नै हो । त्यस्तो बिरामीहरुलाई हामी बाहिरबाट हर्मोन दिने गर्छौं। यदि यो विधि अपनाउँदा पनि नियमित महिनावारी भएन भने शरीर भित्रको रसायनले गर्दा नै यस्तो भइरहेको हो भने अन्य उपचार विधि तिर लाग्नु पर्ने हुन्छ ।
४. महिनावारी गडबडी भएमा गर्भधारण गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने गरिन्छ नी यो कुरामा कतिको सत्यता छ ?
प्रजनन उमेरमा भएको महिला जो विवाहित हुनुहुन्छ तर महिनावारी अनियमित छ । २ -३ महिनासम्म महिनावारी नहुने र बच्चा बनाउन चाहाना हुँदा हुदै पनि भइरहेको छैन भने सकेसम्म छिटो स्त्रि रोग विशेषज्ञलाई भेट्नुपर्ने हुन्छ । महिनावरी अनियमित हुने महिलाहरुमा बाझोपना बढि हुने सम्भावना रहन्छ तर यसको समयमै उपचार गर्यो भने ठिक हुन्छ ।
महिनावारी गडबडी हुने समस्याको पहिचान गर्न सकिएन र समयमा नै उपचार नगरेमा भविष्यमा बाझोपना हुने सम्भाबना बढि हुन्छ ।
५. जंगफुडले गर्दा पनि महिनावारी अनियमित गराउँछ भनिन्छ नी ?
हालसम्मको अवस्थामा जंगफुडले महिनावारी अनियमित गराउँछ भन्ने कुनै अध्ययन अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छैन । समाजमा यस्ता केहि धारणहरु छन् जसबारे अझै अध्ययन अनुसन्धान हुन बाकि नै छ । त्यसमध्ये जंगफुडले महिनावारीमा प्रभाब पार्छ या पार्दैन भन्ने पनि एक हो ।
जंगफुडको सेवनले महिनावारी गडबडी हुनुमा प्रत्यक्षवा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाब पार्छ भन्ने हालसम्म प्रमाणित भएको छैन । तर जंकफुडको सेवन स्वास्थ्य हिसाबले हानिकारक मानिन्छ ।
६. महिनावारी गडबडीबाट कसरी छुटकारा पाउँन सकिन्छ ?
महिनावारी अनियमित हुनुका विभिन्न कारणहरु छन् ।
महिनावारी गडबडी हुन नदिनका लागि सबैभन्दा पहिला एस्ट्रल औषधिहरु जस्तो आकस्मिक अवस्थामा आइपिल अथावा ७२ घण्टा भित्र प्रयोग गरिने गर्भनिरोधक चक्कीको प्रयोग र परिवार नियोजनको अस्थायी साधन प्रयोग गर्ने महिलाहरुमा पनि महिनावारी गडबढिको समस्या देखिन्छ । परिवार नियोजनको अस्थायी साधनको प्रयोग गर्दा आफुलाई सुट नगर्ने साधन प्रयोग गर्नुहुदैन । कुनै पनि चिकित्सको परार्मश बिना आफ्नो इच्छा अनुरुप औषधि पसलमा गएर कुनै प्रकारको औषधि सेवन गर्नु हुदैँन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्न जान्छ । आकस्मिक अवस्थामा यस्तो औषधिको प्रयोग गर्न परेमा स्त्रि रोग विशेषज्ञसँग परार्मश लिएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ ।
७. कस्तो अवस्थामा पाठेघर सफा गर्नू पर्ने हुन्छ ?
महिलाको इच्छा विपरित गर्भ रहेमा त्यसलाई फाल्न अर्थात गर्भपतन गर्नका लागी चिकित्सकको परामर्श बिना औषधिको प्रयोग गर्दा पूर्ण रुपमा नगएर केहि भाग पाठेघरमा नै बस्यो भने त्यस्तो अवस्थामा पाठेघर सफा गर्नुपर्ने हुन्छ । महिलाहरुको रगत धेरै भयो भने त्यसलाई सफा गर्नु पर्ने हुन्छ । पाठेघरको लियर नै सफा गर्नु पर्यो भने महिनावारी गडबडी हुन सक्छ ।
८. लामो समय महिनावारी अनियमित हुने महिलाहरुमा पनि पाठेघर सफा गर्नु पर्छ ?
पाठेघरको लिएरहरु हुन्छ । कहिले काहि महिलाहरुमा महिनावारी भयो तर रगत राम्रो सँग गएन वा धेरै गयो औषधिले पनि काम गरेन भने पाठेघर सफा गर्नु पर्ने हुन सक्छ । पाठेघर सफा गरिसकेपछि नँया लिएरले हार्मोन रिलीन गर्ने काम गर्छ ।
महिलाहरुको हर्मोन निकाल्ने काम डिम्बाशयले (ओभरी) गर्छ । त्यसैले ओभरीको अवस्था हेर्न पनि उतिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसमा कुनै पनि किसीमको सिस्ट, वा छोक्राहरु केहि आएर हार्मोनहरु घटबढ भइरहेको हुन सक्छ । त्यसकारण ओभरीको पनि परिक्षण गरिरहनु पर्छ । पाठेघर मोटो छ भने पनि धेरै रगत जाने सम्भावना हुन्छ ।
९. कतिपय महिलाहरुमा महिनावारीको समयमा रगतै नजाने कालो कालो जोक्टा (ब्लड क्लट) जस्तो पर्ने गरेको पाइन्छ यसलाई कस्तो रुपमा लिने ?
मैले पनि यस्तो बिरामी भेटेको छु । उनिहरु महिनावारीमा मेरो त रगतै जादैँन, कोलो चोक्टा मात्र आउँछ भनेर निकै चिन्तित हुन्छन् । यदि कसैको पाठेघर पात्लो छ र शरीरमा आइरनको मात्र कम छ भने पनि रगत नजाने समस्या देखिन सक्छ । त्यस्तै, हार्मोलन गडबडीका कारण पनि रगत नजाने हुन सक्छ ।
पाठेघर भित्र खोक्रो हुन्छ । त्यसमा जमेको रगत बिस्तारै आउँछ र चोक्टा भएर निस्कन्छ । तर नजमेर सिधै आउँने रगत कहिलेपनि ड्राक कलर भएर जादैन । यस्तो समस्या देखिएमा बिज्ञसँग परार्मश लिनु पर्छ यसलाई सामान्य मान्न सकिदैन ।
महिलाहरु आफ्नो स्वास्थ्यप्रति त्यति सजक भएको पाइदैन । उनिहरुलाई समय सयमा स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहनुपर्छ । महिनावारी गडबढि प्रायः महिलामा हुने गर्छ । महिनावारी गडबडी एउटा आम समस्या हो । समयमा नै विज्ञसँग परामर्श लिएर उपचार गराएमा भविष्यमा आउनसक्ने अन्य समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ।
अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन पेश प्रदेश प्रमुख कलौनीसमक्ष